Huawei Y5 Lite: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista | Androidsis
Android Go waxay magac ku yeelatay suuqa taleefannada. Noocan nidaamka hawlgalka, kaas oo munaasabad ayaan kugula hadalnay, Waxay noqotay ikhtiyaar aad loo jecelyahay oo loogu talagalay moodooyinka hooseeya. Taleefan cusub ayaa kudarsanaya. Kani waa Huawey Y5 Lite. Waa taleefankii labaad ee ka soo baxa soosaaraha Shiinaha ee adeegsada noocyadan nidaamka qalliinka.
Xaaladdan oo kale, tan Huawei Y5 Lite waa horumar muhiim ah loogu talagalay soo-saaraha iyada oo la tixgelinayo moodalkii ugu horreeyay ee ay soo bandhigeen. Naqshad aad u badan oo hadda jirta, marka lagu daro qeexitaanno fiican oo muuqda. Waxay nooga tegayaan moodel heer-gal ah, laakiin taasi maaha mid aasaasi ah.
Sidan oo kale, waxaan aragnaa sida Android Go waxaa taageera qaar ka mid ah soo saarayaasha ugu waaweyn on Android, sida Huawei iyo Samsung, kaasoo bilaabay bilicdiisa dhowr bilood ka hor. Hal dhinac oo sii wadaya inuu soo jiito dareenka ayaa ah in qaabkani uu la socdo Android Oreo Go. Ceeb, maxaa yeelay Android Pie sidoo kale waa loo heli karaa moodooyinkan.
1 Caddaymaha Huawei Y5 Lite
Caddaymaha Huawei Y5 Lite
Heerka farsamada, tan 'Huawei Y5 Lite' waa nooc gaadhaya baaxadda gelitaanka ka timid soo saaraha Shiinaha. Ma jiraan wax la yaab leh oo na sugaya, laakiin si uun ayaan ugu aragnaa horumar dhinacooda ah qaybtaan. Sidoo kale, joogitaanka Android Go wuxuu bixiyaa khibrad adeegsi oo wanaagsan. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Screen: 5.45-inch TFT LCD oo leh 1440 x 720 xallinta (295 ppi)
Gacaliye: MediaTek MT6739
Kaydinta Gudaha: 16 GB (Lagu ballaarin karo microSD)
Cámara trasera: 8 Xildhibaan leh fur f / 2.0
Kaameerada hore: 5 Xildhibaan leh fur f / 2.2
Batariga: 3.020 mAh
Xuduudaha kala duwan: 4G, LTE, Bluetooth 4.2, microUSB, GLONASS, AGPS, Wi-Fi 802.11
Nidaamka hawlgalka: Android Oreo Go Edition
Cabbirada: 146.5 x 70.9 x 8.3 mm
Peso: 142 garaam
Dhibaatada aan sida joogtada ah uga helno taleefannada Android Go waa kuwa wax soo saara waxay sharad ku yihiin qeexitaannada ugu fudud, si loo yareeyo kharashka. Wax kiisaska badan ku dhammaada taleefannada leh tilmaamo liita ama aad u xaddidan. Waa wax si yar looga arki karo Huawei Y5 Lite.
Tani waa wax aan haddaba ku arki karno qaabeynta taleefanka, wax hadda jira, marka lagu daro soo bandhigida shaashad tayo sare leh iyo xal fiican. Laga soo bilaabo waxa aan aragno in soo-saaraha uu si dhab ah u qaatay dhinacan. Waxay sharad ku galaan shaashad leh saamiga 18: 9 iyo geesaha la aqbali karo.
Huawei Y5 Lite wuxuu u hoggaansamayaa marka la eego keydinta, oo leh 16 GB, oo aan ku ballaarin karno microSD. Waa war wanaagsan oo loogu talagalay dadka isticmaala, maaddaama moodooyinka kale ee wata 'Android Go' ay mararka qaarkood la yimaadaan 8 GB oo keyd ah, taas oo runti aan siinin dadka isticmaala fursado badan. Xaaladdan oo kale, xoogaa xoriyad badan ayaa loo hayaa isticmaalaha markay timaaddo soo degsashada barnaamijyada ama faylal lagu keydiyo taleefanka.
Inta soo hartay, iyada oo aan layaab badan laga haynin kamaradahaheeda, waa suubban tahay. Batariga kiiskan waa 3.020 Mah, taas oo layaab ku ah cabirkeeda. Waxa caadiga ah ayaa ah in moodooyinka noocan ah ay ka yar yihiin. Laakiin waxay ballanqaadaysaa inay siinayso dadka isticmaala madax-bannaani ku filan isticmaalka maalin kasta ee taleefanka.
Su'aasha ugu weyn ayaa ah in Huawei Y5 Lite iyo in kale laga bilaabi doono suuqyada Yurub. Telefoonkii ugu horreeyay ee Android Go ee ka soo baxa nooca Shiinaha laguma soo saarin Yurub. Waxaa laga iibsan karaa Aasiya iyo Afrika, laakiin meel kale. Sidaa darteed, waxay u badan tahay in xaaladda lagu soo celin doono qaabkan. In kasta oo aan hadda wax xaqiijin ah laga hayn arrintan.
Huawei Y5 Lite ayaa horay loogu soo bandhigay Pakistan, Halkaas oo ay ku imaaneyso qiimo dhan 16.500 rupees (qiyaastii 103 euro in la beddelo). Waxaa lagu sii daayaa laba midab (madow iyo buluug). Laakiin, waa inaan sugnaa in yar oo dheeri ah si aan u ogaanno in ugu dambeyn qaabkan leh Android Go ee sumadda Shiinaha la bilaabay ama uusan ku jirin suuqyo cusub. Xaqiiqdii suuqyada Aasiya waad awoodi doontaa inaad wax iibsato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei Y5 Lite: Nooca cusub ee casriga ah ee Android Go